Ungayilungisa kanjani indawo yokusesha injini yokusesha?
Cabanga ngesimo oye waphendulela iphupho lakho empeleni futhi wethula iwebhusayithi yakho siqu. Manje, sekuyisikhathi sokuthuthukisa ukutholakala kwakho kwe-intanethi nokuheha amakhasimende akho angaba khona kusizinda sakho esisha. Yiqiniso, ukukhushulwa kwewebhusayithi yakho akunakwenziwa ngosuku njengoba kuthatha isikhathi sokuba abashayeli bokusesha babhale isizinda sakho. Noma kunjalo, ungathonya le nqubo usebenzisa ukusebenza kwe-injini yokusesha. Njengoba i-SEO yinkqubo echitha isikhathi, ngeke uthole imiphumela ngokushesha. Noma kunjalo, ukuthuthukiswa kokuqala kokuthuthukisa okwenzayo ngemva kokuqaliswa komthombo wakho wewebhu kungaba nomthelela omkhulu ekusebenzeni kwakho kwebhizinisi ku-intanethi. Isibonelo, ukukhethwa kwegama elingukhiye elungile kunomthelela omkhulu ekukholeni kwakho okuzayo kwe-intanethi njengoba amakhasimende akho angase athole isayithi lakho ngalawa magama okusesha. Udinga ukwakha umkhankaso wokuhlelwa kahle kokusebenza ngesikhathi esisodwa ukuze ulondoloze isikhathi esizayo futhi unciphise isidingo sokulungisa noma yimaphi amaphutha wewebhu.
Kulo mhlahlandlela, uzothola amanye amathiphu kulabo abanikazi besayithi abavele baqala imithombo yabo yewebhu. Amathiphu alandelayo azokusiza ukuklama isu elihle lokusungula injini yokusesha noma nini lapho uvula iwebhusayithi entsha ukuze uqiniseke ukuthi yenzelwe kusukela ekuqaleni ukuheha ithrafikhi yekhwalithi kusuka ezinjini zokusesha.
Ngingabona kanjani i-website yami esanda kusungulwa?
Amagama angukhiye ahloswe
Udinga ukwakha iwebhusayithi yakho ngamagama angukhiye afanele ukuthuthukisa i-rankings yayo. Ikhasi ngalinye lesayithi lakho kufanele libheke iqoqo layo lamagama angukhiye afanele, aphezulu kakhulu ukuze kusize ibhulogi yokusesha ihlasele okuqukethwe kwakho. Udinga ukwehlisa isakhiwo sakho sewebhusayithi ngezigaba eziningana ezahlukene. Uhlobo ngalunye kufanele luhloswe ngegama elihlukile lokusesha ukuphakamisa ithuba lakho lokufika ku-Google TOP ngemibuzo ehlobene ehlukahlukene. Iwebhusayithi yokwakha inezinzuzo eziningi. Okokuqala, kudala isihloko esicacile kanye nesikhathi sokusesha okubhekiswe kukhasi ngalinye lewebhu, esikhundleni sokuthi ikhasi eliyinhloko libheke amagama angukhiye amaningi. Lolu hlobo lokukhomba lunikeza ukufaneleka okuphezulu kwewebhu kuwebhusayithi.
Okuqukethwe okwenzelwe umsebenzisi
Njengamanje, okuqukethwe okuhambisana nekhwalithi kusebenza njengesici esibalulekile se-Google. Isizukulwane sokuqukethwe esilungisiwe siyingxenye yokuhlelwa kwe-site. Kusho ukuthi abanikazi bewebhu bangalawula ngokugcwele le ngxenye ye-SEO. Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala noma yimiphi imizamo ephumelelayo ye-SEO, qinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kuhlelwe kahle futhi kuhambisana nembonini yakho nokuzibandakanya. Ngaphezu kwalokho, udinga ukufaka amagama angukhiye afanele kokuqukethwe kwakho ukwenza kube kubonakale ekusesheni ibhu. Ngineluleka ukuthi ufake amagama angukhiye ephezulu kakhulu wezombhalo nezindlela zokuthola izimoto eziqhingini nasekuqaleni kwesigaba. Ngaphezu kwalokho, ungawasebenzisa ezinchazeni nase-ALTs.
Ngokusho kophenyo lwakamuva, i-Google iphakamisa lawo maphepha anamazwi angaphezu kuka-2,000+ amakhasi anokuqukethwe okufushane futhi okulula njengoba ngokuvamile engenzi lutho kubasebenzisi abajwayelekile 'ulwazi. Yingakho ngeluleka ukubhala amakhasi angu-2-3 ama-athikili amade ngokuhlela okuqinile, isibonelo, iziqondiso ezinyathelo ngezinyathelo, izifundo noma amathiphu. Ucwaningo lubonisa ukuthi okuqukethwe okude nokuphakathi okuphakathi kungathola izixhumanisi kunemibhalo emifushane. Ekugcineni, kuzokusiza ukwakha inombolo enkulu yezixhumanisi ezingenayo kuya ekhasini ngalinye Source .